TaraTalk ဆကျသှယျရေးနှငျ့ ဆိုရှယျမီဒီယာ မိုဘိုငျးလျ အကျပလီကေးရှငျးဟာ Tara Aung ကုမ္ပဏီမှ ဖွဈပွီး သငျနှဈသကျရာအသံ(သီခငျြး၊ အငျတာဗြူး၊ မိနျ့ခှနျး၊ သတငျး အစရှိရာ) တို့ကိုအခွားသူမြားနှငျ့အတူနားထောငျနိုငျစသေညျ။ ခကျြတငျအခနျးထဲမှအခွားသူမြားလညျး သငျဘာနားထောငျနလေဲဆိုတာကို သိရှိနိုငျပွီး
ကလဈတဈခကျြနှိပျရုံနှငျ့ သူတို့လညျး သငျနားထောငျနတောရော နားထောငျခဲ့တာကို ပါနားဆငျနိုငျမှာဖွဈသညျ။ အတူတူနားထောငျရနျ ဖိတျလို့လညျးရပွီး ဖိတျချေါခွငျးကို တဈဖကျက လကျခံလငျြ နှဈဖကျစလုံးတဈပွိုငျနကျတညျး နားထောငျနိုငျမှာဖွဈသညျ။
အသံတှကေို SoundCloud® မှတိုကျရိုကျယူထားခွငျးဖွဈသညျ့အတှကျ SoundCloud® တှငျရှိသညျ့အသံအားလုံး TaraTalk နဲ့အလှယျတကူရနိုငျသညျ။
TaraTalk နှငျ့ အခြိနျမရှေးဆကျသှယျပွီး အတူတူနားထောငျကွမယျ။
အသံရှာ၍ ခကျြတငျအခနျးတှငျ နားထောငျခွငျး
Facebookနှငျ့တှဲထားခွငျး။ Facebook နှငျ့အကောငျ့ ဝငျခွငျး
စာပို့ခွငျး၊ စာဖတျခွငျး၊ စာရေးနခွေငျးအခွအေနပွေခွငျး
အသံဖိုငျမြား နောကျဆုံးရှာဖှခေဲ့သော နောကျဆုံးနားထောငျခဲ. သော အနှဈသကျဆုံး သော အထူးဖွဈသော
ပိုမိုကောငျးမှနျသော အဂါင်္ရပ်မြားကိုနောငျလာမညျ့ အကျပလီကေးရှငျးတှငျထညျ့သှငျးပေးပါမညျ။ ကြေးဇူးပွု၍ သငျတို့ရဲ့ စိတျကူးစိတျသနျး အကွံအဉာဏျမြားကို အသိပေးပါ။
TaraTalk ကိုပွညျတှငျးနညျးပညာရှငျမြားဖွဈရေးဆှဲထားပွီ: အကောငျးဆုံးကွိုးစားပွီး ဆောငျရှကျသှားပါမညျ။
TaraTalk ဆက်သွယ်ရေးနှင့် ဆိုရှယ်မီဒီယာ မိုဘိုင်းလ် အက်ပလီကေးရှင်းဟာ Tara Aung ကုမ္ပဏီမှ ဖြစ်ပြီး သင်နှစ်သက်ရာအသံ(သီချင်း၊ အင်တာဗျူး၊ မိန့်ခွန်း၊ သတင်း အစရှိရာ) တို့ကို အခြားသူများနှင့်အတူနားထောင်နိုင်စေသည်။ ချက်တင်အခန်းထဲမှအခြားသူများလည်း သင်ဘာနားထောင်နေလဲဆိုတာကို သိရှိနိုင်ပြီး ကလစ်တစ်ချက်နှိပ်ရုံနှင့် သူတို့လည်း သင်နားထောင်နေတာရော နားထောင်ခဲ့တာကို ပါ နားဆင်နိုင်မှာဖြစ်သည်။ အတူတူနားထောင်ရန် ဖိတ်လို့လည်းရပြီး ဖိတ်ခေါ်ခြင်းကို တစ်ဖက်က လက်ခံလျှင် နှစ်ဖက်စလုံးတစ်ပြိုင်နက်တည်း နားထောင်နိုင်မှာဖြစ်သည်။ အသံတွေကို SoundCloud® မှတိုက်ရိုက်ယူထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက် SoundCloud® တွင်ရှိသည့်အသံအားလုံး TaraTalk နဲ့အလွယ်တကူရနိုင်သည်။
TaraTalk နှင့် အချိန်မရွေးဆက်သွယ်ပြီး အတူတူနားထောင်ကြမယ်။
အသံရှာ၍ ချက်တင်အခန်းတွင် နားထောင်းခြင်း
Facebookနှင့်တွဲထားခြင်း။ Facebook နှင့်အကောင့်ဝင်ခြင်း
စာပို့ခြင်း၊ စာဖတ်ခြင်း၊ စာရေးနေခြင်းအခြေအနေပြခြင်း
အသံဖိုင်များ နောက်ဆုံးရှာဖွေခဲ့သော နောက်ဆုံးနားထောင်ခဲ. သော အနှစ်သက်ဆုံး သော အထူးဖြစ်သော
ပိုမိုကောင်းမွန်သောအဂါင်္ရပ်များကိုနောင်လာမည့် အက်ပလီကေးရှင်းတွင်ထည့်သွင်းပေးပါမည်။ကျေးဇူးပြု၍ သင်တို့ရဲ့ စိတ်ကူးစိတ်သန်း အကြံအဉာဏ်များကို အသိပေးပါ။ TaraTalk ကိုပြည်တွင်းနည်းပညာရှင်များဖြစ်ရေးဆွဲထားပြီ: အကောင်းဆုံးကြိုးစားပြီး ဆောင်ရွက်သွားပါမည်။ TaraTalk ရဲ့ပထမဆုံး အက်ပလီကေးရှင်းကို Android platform တွင်ဖြန့်ချိမည်ဖြစ်ပြီး Ice Cream Sandwich(version 4) ထည့်သွင်းထားသော ဖုန်း တက်ဘလက်များဖြင့် သုံးစွဲနိုင်ပါသည်။
TaraTalk, communication and media mobile app from Tara Aung Company Team, let you listen together your favourite sound (music, interview, speeches, news, etc) with others.
The other participants of the chat room will know what you're listening and at the click ofabutton, they can join in and listen the same piece.
You can invite them to listen together and when they accept, you both will listen together at the same time the piece you have searched.
Sound will be streamed via SoundCloud®, so anything on SoundCloud® is easily available to you with TaraTalk.
Let’s connect any time & listen together with TaraTalk!
Search and listen now in chat rooms
Send invitation to listen together
Facebook integration / log in with Facebook account
Import friends from contacts/Facebook
Message statuses, send, read, now typing
Playlists, last searched, recent, favourite, genre, special …
More cool features will be added through updates.
Please do let us know your ideas, suggestions and feedback to us and we will try our best to address.
The first release of TaraTalk app will be on android platform supporting from Ice Cream Sandwich (version 4.0) devices.
​​​Tara Aung Co., Ltd
TARA POS System
TARA Shop POS